Toga UAE, gụnyere Dubai, India, na mba 14 ndị ọzọ nwere nnukwu ntaramahụhụ maka ndị Saudis
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » Toga UAE, gụnyere Dubai, India, na mba 14 ndị ọzọ nwere nnukwu ntaramahụhụ maka ndị Saudis
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
N'ụbọchị COVID-19 enwere ụdị mmekọrịta abụọ dị n'etiti mba. Ọ bụ ezie na mmekọrịta dị n'etiti Saudi Arabia na UAE gbara agbata obi dị mma, COVID-19 mere ka ọ bụrụ ihe iwu na-akwadoghị maka ụmụ amaala Saudi Arabia ịga Dubai, Abu Dhabi na United Arab Emirates ndị ọzọ-na ntaramahụhụ ahụ siri ike.
Alaeze Saudi Arabia bụ obodo 35,393,638 mmadụ. Ruo taa, 522,108 ndị Saudis jidere COVID-19 na 8200 nwụrụ.
Saudi Arabia nọ n'ọnọdụ 126 n'ụwa maka mba COVID -118 kacha emetụta na ụwa na ọnụọgụ ọnwụ.
Neigboring UAE na mba iri na ise ndị ọzọ nọ na ndepụta enweghị njem njem edepụtara maka ụmụ amaala Saudi nwere oke ntaramahụhụ maka ndị dara iwu.
Ugbu a, mmadụ 11,379 ndị Saudi Arabia bu COVID-19 na ikpe 1,406 bụ nnukwu ụlọ ọgwụ.
N’izu gara aga, Alaeze debara aha ikpe 8,824 ọhụrụ, site na 8,324 maka izu gara aga, nke bụ mmụba 6%. Mmadụ 85 gafere, ma e jiri ya tụnyere 95 n'izu gara aga, nke bụ mbelata 11%.
20% nke ụmụ amaala Saudi Arabia na -agba ọgwụ mgbochi nke ọma na ha enwetala ntụtụ abụọ, 33% ọzọ natara ọgwụ izizi.
Agbataobi United Arab Emirates nwere 69% nke ndị mmadụ ọgwụ mgbochi nke ọma yana 8.5% ọzọ natara ọgwụ izizi.
United States ma e jiri ya tụnyere 49% gbara ọgwụ mgbochi yana 7.8% gbakwunyere na ọ nwetachara ọgwụ mbụ.
Agbanyeghị, ala Saudi Arabia nwere UAE na ndepụta aha ya nke na-eme njem na Emirates ịbụ mpụ.
Libya, Syria, Lebanon, Yemen, Iran, Turkey, Armenia, Ethiopia, Somalia, Congo, Afghanistan, Venezuela, Belarus, India, na Vietnam nọkwa na ndepụta uhie Saudi.
Nwa amaala Saudi ọ bụla ejidere na-aga mba ọ bụla na ndepụta ndepụta ọbara ọbara ka na-eche ntaramahụhụ gụnyere mmachibido njem njem afọ atọ.
Ozi a kpọrọ ụmụ amaala ka ha ghara ime njem ozugbo ma ọ bụ na-apụtachaghị ìhè na mba ndị edepụtara na-edebeghị ebe oria ojoo a na-enwebeghị ma enwere oke mmụba nke ụdị coronavirus na-agbanwe agbanwe.
Ọ gwakwara ụmụ amaala ka ha kpachara anya ma zere ebe enweghị ike ma ọ bụ nje na -agbasa, ma na -akpachapụ anya n'agbanyeghị ebe ha na -aga.
Saudi Arabia na -etinye nnukwu ego ugbu a n'ịrụ njem njem na ụlọ ọrụ njem yana n'ịkwado ụwa ijeri dọla na -akwado ngalaba njem.
UNWTO, WTTC, Resilience njem nlegharị anya na ebe nlekọta nsogbu niile mepere ụlọ ọrụ na alaeze. Mgbe ụwa njem na -achọ enyemaka, Saudi zara oku a, na -etinye Alaeze ahụ n'oche onye ndu ụwa niile nke ngalaba a.
Ọzọkwa, njem na njem njem na mba GCC hdị ka nnukwu mmụba n'ime afọ ole na ole gara aga.
Isi nke Saudi nke Network Njem Nleta Ụwa amalitela Otu ndi njem nleta nke Saudi igba.